Kumboduba kwaVaTrump Muchipatara Kumhoresa Vatsigiri Vavo
VaTrump vachimhoresa vatsigiri vavo pagedhe rechipatara cheWalter Reed.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, avo vakanga vachirapwa vari pachipatara che Walter Reed National Military Medical Center, muguta re Bethesda pedyo neWashington D.C, vakambobuda muchipatara ndokupinda mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo vakange vakaungana pagedhe rechipatara ichi.
Izvi zvakashorwa zvikuru nevamwe vanachiremba avo vakati izvi hazvaifanirwa kubvumidzwa kumurwere anec hirwere chinouraya uye chinotapuriranwa nyore nyore.
VaTrump nemudzimai wavo vakazivisa nemusi weChina kuti vane coronavirus, uye VaTrump vakadzokera kuWhite House neMuvhuro manheru.
Nyanzvi mune zvehutano, Doctor Frenk Guni, vakaudza Studio7 kuti VaTrump vari kupiwa mishonga yakawanda, vachiti mishonga iyi ichiri kuyedzwa uye haisati yave nemvumo yekutengeswa kana kushandiswa nevanhu vese vese.
Vamwe vanachiremba vepachipatara ichi asi vasiri kurapa VaTrump vakashora zvakaitwa naVaTrump nevanachiremba vavo vachiti kumbobuda kwakaitwa naVaTrump muchipatara ivo vane vasati vapora kunopinza veruzhinji pangozi.